सेना–प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता - HimalayaMail.com
Home » नेपाल » सेना–प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता
काठमाडौं । सेना–प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता हुन थालेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल (एपीएफ) को लत्ताकपडा खरिद अपारदर्शी र सार्बजनिक खरिद ऐनविपरित भेटिएपछि छानबिन थालेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेले जनाएको छ।
आव २०७४÷०७५, २०७३/०७४ र २०७२/०७३ को पोशाक खरिदका विषयमा छानबिन भइरहेको महालेखाले जनाएको छ। हरेक वर्ष सुरक्षाकर्मीले बुट, चुस्ता, ट्राउजर, ज्याकेटलगायत मौसम अनुसारका आधादर्जन लत्ताकपडा पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर खरिदमा हिनामिना र ठेकेदारले शर्तअनुसार सामान उपलव्ध नगराउँदा ३ वटै सुरक्षा निकायका सदस्यले सरकारले तोकेअनुसार लत्ताकपडा पाउँन सकेका छैनन्।
शर्तअनुसार खरिद नहुँदा सेना प्रहरीका जवानको पोशाकको गुणस्तर र रङ समेत फरक–फरक पर्ने गरेको छ। अघिल्ला ३ आवमा प्रहरीका लागि पोशाक खरिदअन्तर्गत विनियोजित रकममध्ये ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी फ्रिज भएको छ। यो अवधिमा सशस्त्रको ३० करोडभन्दा बढी रकमसमेत फ्रिज भएको छ। पोशाकको रकम सेनामा भने त्यति धेरै फ्रिज नभएपनि खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी देखिएको लेखा परीक्षणमा संलग्न अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी उत्तमकुमार कार्की पोशाक भत्ता बैंकिङ च्यानलमार्फत उपलव्ध गराउने र त्यसबापत व्यक्तिगत रुपमै हेडक्वार्टरले निर्धारण गरेको स्याम्पलका आधारमा सामान किन्ने व्यवस्था भए अनियमितता रोकिने बताउँछन् । आव २०७३/७४ यताको ३ आवमा चारवटै सुरक्षा निकायले पोशाक खरिदका लागि करिव ७ अर्ब रुपैयाँ पाएका छन्। केही महिना अघि मात्रै महालेखाले सेना, प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारीलाई बोलाएर खरिदबारे जानकारी लिएको छ।
आव २०७३/०७४ मा २ अर्ब ४ करोड ३३ लाख, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख र चालू आव २०७५/०७६ का लागि २ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा अघिल्ला २ आवको बजेटमै ठूलो रकम अपारदर्शी रूपमा खर्च भएको महालेखाको भनाइ छ। महालेखाका अधिकारीले पछिल्लो ३ वर्षको पोशाक खरिदको बजेट र खरिदका क्रममा अवलम्वन गरेका विधि तथा प्रक्रिया सम्वन्धि कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिने बताए।
यसअघि वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर खरिद प्रक्रिया तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नियमसंगत बनाउँन पटक–पटक निर्देशन दिदा पनि सुधारका प्रयास नगरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले आगामी कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमै सुरक्षा निकायको पोशाक खरिदसम्बन्धि विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। “पटक–पटक खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नियम संगत बनाउँन हामीले सुझाव सहितको निर्देशन दिएका थियौं,” शर्माले भने, “तर हरेक वर्ष खरिदका क्रममा अपनाइएका विधि र प्रक्रियामा सुधार नभएपछि यस पटक कार्यमूलक लेखापरीक्षण अन्तर्गत नै डिटेल हेर्न लागेका हौं।”
Previous Post लागुऔषधसहित तीन युवक पक्राउ
Next Post प्रोपर्टीमा ब्रेक्जिटको प्रभाव कस्तो? घर किन्न या बेच्न फाईदा ? (भिडियो सहित )
काठमाडौँ । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटेपछि कक्षा ११ र १२ मा कानून विषयमा कक्षा सञ्चालन नभएको स्थितिमा नेपाल विद्यापीठ
15/05/2019 10CommentsBy: himalayamail
स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा प्रस्ताव प्रस्तुत
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी यथाशीघ्र तोक्न कार्यविधि ल्याउने विषयमा सत्तारुढ